बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभएको थियो संसदमा भाइरल भयो (पूर्ण पाठ सहित) – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
२०७५, ३० बैशाख आईतवार ०९:०९
ओम महतो, काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले केहिदिन पहिले संसदमा बोलेको कुरा निकै चर्चाको बिषय बनेको थियो । पुन एकपल्ट भट्टराईलाई चर्चामा ल्याउनुको साथै जनताको मनमा बस्न सक्नुभएको छ । उहाँको योजनाले देश समृद्ध बन्ने जनताको बुझाई हुन थालेको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा थोरै सिटमा सिमित रहेको पार्टीलाई अब पुन नयाँ उचाईमा पुर्याउन संयोजकले नयाँ कोर्ष बनाउनुपर्ने भन्दै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले सल्लाह दिएका छन् भने उहाँको संसदमा भएको कमब्याकले पुन मुलुकलाई फाइदा पुग्ने जनताको बुझाई रहेको छ ।
बैशाख २७ गते संघीय संसदमा राखिएको सम्बोधन
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई
सम्माननीय सभामुख महोदय, समय दिनुभएकोमा म अत्यन्त आभार व्यक्त गर्दछु । मैले केही अन्य विषयहरु राख्नको लागि समयको माग गरेको थिएँ । किनकी संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनपश्चात् बनेको यो गरिमामय संसदमा मैले पहिलोचोटि उभिँदा केही अनुभूति राख्न चाहेको थिएँ । तर, संयोगले हिजो मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको हुनाले त्यसबारे पनि आज हामीले छलफल गर्दैछौं । त्यसैले आज म यहाँहरुसँग थप समय माग नगरीकन मेरा अनुभूतिजन्य केही भनाईहरुसहित मुलतः म प्रि–बजेट भनिने माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति म आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नेछु ।
यो सदन एउटा सामान्य सदन होइन । हामी अहिले बाँचिरहेको कालखण्ड नेपाली इतिहासको अत्यन्त महत्वपूर्ण कालखण्ड हो । मेरो विचारमा नेपाली इतिहासका दुईवटा कालखण्ड मात्रै भविष्यमा सम्झन लायक हुनेछन् । एउटा पृथ्वीनारायण शाहदेखि भीमसेन थापासम्मको नेपालको भौगोलिक एकीकरणको एउटा कालखण्ड । यो कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरुले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे र नेपाल नाम गरेको राज्य आज हामीलाई प्राप्त छ । हामी आशा गर्छौं, जतिबेलासम्म विश्वमा नेशनल स्टेट अथवा राष्ट्रिय राज्य बाँकी रहनेछन्, नेपाल रहिरहनेछ । यसर्थ, पहिलो कालखण्ड गौरवशाली कालखण्ड रह्यो ।
दोस्रो कालखण्ड तपाईं हामी बाँचिरहेको कालखण्ड हो । वि.सं. १९९० आसपासदेखि लिएर २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएसम्मको लोकतान्त्रिकरणको कार्यकाल हो । यसबीच, नेपाली जनता सम्पूर्णरुपले अधिकारसम्पन्न बन्ने र संसारमा विकसित भएका सबै ज्ञान विज्ञानले सुसज्ज्ति सबैभन्दा उन्नत राज्यप्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले संघर्ष गर्‍यौं । सबैभन्दा पहिला प्रजा परिषद, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका कम्युनिष्ट घटकहरु र अन्तिम कालखण्डमा माओवादी, मधेसवादी, थारु, जनजाति, महिला, दलित आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । यहाँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादी र मधेसवादी दलहरुमा आवद्ध हामी सबैको साझा प्रयत्न, त्याग र बलिदानमार्फत हामीलाई यो उपलब्धि हासिल भएको छ । यो कालखण्ड नेपाली इतिहासमा कहिल्यै पनि बिर्सन नसकिने कालखण्ड हुनेछ । यो गरिमामय सदन त्यसैको एउटा उपज हो ।
त्यसैले, यो गरिमामय सदन एउटा सामान्य अर्थमा मात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन । समय खेर फाल्नु हुँदैन । हामी नेपाली इतिहासको अर्को अर्थात् तेस्रो कालखण्डमा प्रवेश गर्दैछौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा टेकेर समाजवादतिर जाने हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हाम्रो संविधानले नै भनेको छ- अब हामी विकास र समृद्धिको एउटा खुड्किलोमा टेकेर सम्मुनत समाजवादमा जान्छौं । हामी जुनसुकै विचारधाराको भए पनि सर्वसम्मतले त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हामी तेस्रो कालखण्डमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यसैले यो तेस्रो कालखण्डको भूमिका हामीले यो सदनबाट निर्वाह गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? यो सदनलाई यही लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उपयोग गर्नुपर्नेछ ।
यहीँनेर एकजना प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिकले भनेको कुरा म सम्झन चाहन्छु । उनले भनेका थिए– ‘क्रान्तिपश्चात अधिकांश क्रान्तिकारीहरु प्रतिक्रान्तिकारीमा बदलिन्छन् र बाँकी रहेकाहरुले क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ कतै हामी पनि यति ठूलो बलिदानपूर्ण क्रान्तिबाट आएका शक्तिहरु फेरि एउटा चरण पूरा भइसकेपछि अर्को चरणमा क्रान्तिकारी रापताप छाडेर यथास्थितिवादी प्रतिक्रान्तिकारी बन्ने त होइन ? हिजो क्रान्तिका दौरानमा हामीले गरेका बलिदान र त्यागको ब्याज खोजेर आज हामी फेरि विभिन्न प्रकारका अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत लोभलालचको बार्गेनिङ गर्दै सम्मुनत समाजवादमा पुग्नुपर्ने बाँकी कार्यभारबाट विमुख त हामी हुँदैनौं ? त्यस्तो शंका पनि जनताले हामीमाथि गरिरहेका छन् । त्यसैले, जनताको यो आशंकालाई हामीले मुखले मात्र होइन, व्यवहारतः खण्डन गर्नुछ । आगामी दिनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदैछ, त्यसले त्यसको झल्को दिनेछ । र, हामीले जनताका यी आशंकालाई निवारण गर्नेछौं भन्ने म विश्वास लिन चाहन्छु ।
२१औं शताब्दीमा कस्तो संसद ?
म मेरा अनुभूतिजन्य कुराहरु यहीँ राख्दै थोरै सम्माननीय सभामुखमार्फत मेरो आग्रह के छ भने यो संसदको जुन हामी सञ्चालन गर्दछौं, त्यसलाई अझै प्रत्यक्ष र उन्नत लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने एउटा थलो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले सायद हिजो जानेर/नजानेर युरोप अमेरिकातिरबाट जुन संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भयो, त्यसको सिको गर्‍यौं । त्यतिबेला पूर्ण लोकतन्त्र त्यहाँ थिएन । त्यहाँका अलि टाठाबाठाहरुले संसदमा पहिला प्रवेश पाउँथे । उनीहरुको भाषा बढी लर्ड र ब्यारेनहरुलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका छन् । सबैले संसदमा भाग लिन पाउँदैन थिए । गरिब, महिला र तल्लो वर्गका प्रतिनिधिले पाउँदैन थिए र उच्च वर्गका मानिसहरुले मात्र संसदमा प्रवेश पाउँथे । त्यसको भाषा, शैली र प्रयोग लर्ड, ब्यारेन र ठूला सामन्तहरुले प्रयोग गर्ने भाषा र शैली प्रयोग गर्दै आएका छौं । हाम्रो यो २१औं शताब्दीमा बनेको संसदले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, संवाद गर्ने कुनै पनि किसिमको औपचारिकताभन्दा पनि शिष्ट र मर्यादाजनक ढंगले काम गरेर सिधा विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग होस् भन्ने म चाहन्छु ।
हामीले नियमावली त बनायौं तर, दुर्भाग्यवश मैले त्यसमा खासै भूमिका निर्वाह गर्न पाइनँ । फेरि पनि सम्माननीय सभामुखलाई अवशिष्ट अधिकार सबै हामीले दिने गरेका छौं, संविधानले पनि दिएको छ । त्यसैले यहाँले ती नियमावलीहरुलाई प्रयोगमा ल्याउँदा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने ढंगले त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्रि-बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे
अब म सिधै माननीय अर्थमन्त्रीले हिजै प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७५ माथिको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेमा म आफ्नो भनाई राख्न चाहन्छु ।
निश्चितरुपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएपछि नै त्यसको पूर्ण खाका आउनेछ । त्यो हामीले अपेक्षा गरौं । म पनि गर्दछु । म माननीय अर्थमन्त्री, सायद अहिले उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँले मिहनेत गरेर सांगोपांगो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । त्यसमा हामीले खासै विमति जनाउनुपर्ने कुरा छैन । तर, यो खास अवस्थामा प्रस्तुत हुन लागेको बजेट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । यो हिजोको निरन्तरतामा होइन । ००८ सालमा बजेट प्रस्तुत भएपछि त्यसपछि हामीले धेरै बजेट प्रस्तुत गर्‍यौं । मैले पनि एउटा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको थिएँ । तर अबको बजेट हिजोको निरन्तरता होइन । यो निरन्तरताको क्रमभंग हो । आर्थिक विकास र समृद्धिको चरण हुँदै समाजवादतर्फ जाने युगको यो पहिलो बजेट हुँदैछ । त्यसैले यो केवल निरन्तरतामा जाने ढंगको मात्रै हुनुभएन । मलाई कताकता कस्तो लाग्यो भने यसमा सबै कुराहरु छन् । तर, के के कुराहरु छन् र खास केमा फोकस हो भन्ने कुरा भेउ पाउन सकिनँ ।
एकजना दार्शनिकले भनेका थिए– आइ क्यान नट गिभ यु द फर्मुला फर सक्सेस । बट आइ क्यान गिभ यु द फर्मुला फर फेलियर । ह्विच इजः ट्राइ टु प्लिज इभ्रीबडी । अर्थात् म सफलताको सुत्र दिन त सक्दिन, तर असफलताको सुत्र दिन सक्छु । त्यो भनेको सबैलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्नु । सबैलाई खुसी पार्न खोज्दा कोही पनि खुसी हुँदैन । त्यसैले उहाँको अलिकति दिशानिर्देश सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै कुरा छ, तर, कुन चाहिँ पहिलो, कुन चाहिँलाई सबैभन्दा बढी जोड हो र कुनलाई ध्यान दिने भन्ने कुराको प्रष्टता भने मैले त्यहाँ पाइनँ ।
हुन त संयुक्त सरकार पनि छ । पहिलोपटक उहाँ भिन्न पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकोले पनि अलिकति संकोच र दकश पनि उहाँमा रहेको होला । मेरो उहाँलाई आग्रह छ, त्यसरी दकश मान्नु हुँदैन । उहाँले किटानै गरेर मुख्य प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । यतातिर ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु । यसको सामान्य स्पिरिट निरन्तरतामा छ । तर यो बजेट निरन्तरता होइन ।
कस्तो विकास, कस्तो समृद्धि ?
हामीले भनेको विकास र समृद्धि भनेको सामान्य कछुवा हिंडाईलाई विकास भन्ने होइन । त्यस्तो विकास त भइराखेकै छ । केही नगरे पनि विकास त भइराख्छ । राणाकालमा पनि त्रिचन्द्र कलेज बनेको थियो, फर्पिङ जलविद्युत बनेको थियो । पछि पनि पञ्चायत कालमा पनि बनेका थिए । निरन्तरता त भइरहन्छ, तर हामीले खोजेको क्रमभंगता हो, छलाङ हो । यसको एउटा नियम हुन्छ । प्रसिद्ध वैज्ञानिकले थोमस कुहुनले भनेका छन्– विज्ञानको नियमले पनि एउटा विशिष्ट अवस्थामा पुगेपछि फड्को हान्नुपर्छ भन्छ । ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । हामीले कोर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । विज्ञानको नियमअनुसार पनि विसंगति देखा पर्न थालेपछि वा संकट पैदा हुन थालेपछि हाम्रो चिन्तनमा नै यस्तो फड्को आउँछ र त्यसले ठूलो क्रान्ति ल्याउँछ । यो निरन्तर चक्र चलिरहन्छ भनेर वैज्ञानिकहरुले पनि भनेका छन् ।
भौतिक वैज्ञानिकले पनि यस्तो कुरा गरेका छन् । त्यस्तै समाज विज्ञान र अर्थतन्त्रमा पनि खासखास विन्दूमा पुगेपछि त्यसले फड्को हान्नैपर्छ । ग्रेट लिप अर्थात् टेक अफ गर्नैपर्छ । अहिले हामी इकोनोमिक टेक अफ अथवा लिप लगाउने बेलामा छौं । त्यसैले निरन्तरताको प्रकारको बजेट आउनुहुँदैन । त्यस्तो गन्ध आएको छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
कस्तो समाजवाद, कहिले समाजवाद ?
यसरी नै हाम्रो बुझाई पनि प्रष्टता आउनु आवश्यक छ । हामीले संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौं । त्यो भनेको अहिले नै समाजवाद लागू गर्ने भनेको होइन । हामीले त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । यो भनेको समाजवादतर्फ उन्मुख हो । समाजवाद कसरी आउँछ ? त्यसका विभिन्न परिभाषाहरु छन् । त्यसका विभिन्न अवधारणाहरु छन् । यसलाई हामी सबैले मानेका छौं । कांग्रेसदेखि लिएर कम्युनिष्टका विभिन्न घटक हुँदै अन्य जनजाति र मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका साथीहरुले पनि स्वीकार्नुभएको कुरा, पछिल्लो चरणमा दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिपछि वैज्ञानिक समाजवादको जुन अवधारणा आयो, त्यसैमा टेकेर हामीले समाजवादतिर जाने भनेको हो । त्यो भनेको पुँजीवादको जगमा मात्रै समाजवाद आउन सक्छ । कार्ल मार्क्सले पनि त्यही समाजवाद भने । त्योभन्दा अगाडि पनि समाजवादको कुरा भएको थियो तर, लागू भएन । वैज्ञानिक र वास्तविक समाजवाद भनेको पुँजीवादको जगमा टेकेर मात्र आउँछ । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले पुँजीवादकै विकास गर्ने हो ।
नेपाल अहिले प्राक–पुँजीवादी चरणबाट भर्खरै पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गर्दैछ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ हामी जाँदैछौं । यतिखेर हामीसँग बाँकी रहेका प्राक–पुँजीवादी अवेशषहरुलाई अन्त्य गर्ने र पुँजीवादलाई पूर्णरुपले विकास हुन दिने हो । पुँजीवाद भनेको पराश्रित पुँजीवाद होइन । ब्युरोक्रेटिक प्रकारको, परजीविप्रकारको होइन । राष्ट्रिय पुँजीवाद, उत्पादनशील पुँजीवादको विकास हामीले गर्ने हो । त्यसमा टेकेर मात्र समाजवादतिर जाने हो । समाजवाद उन्मुख हुने हो हामी, अहिले नै समाजवाद ल्याउने होइन ।
नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले सबैलाई खुसी पार्न खोजेजस्तो देखियो । हामीले त्यसो गर्ने होइन । हामीले स्पष्टरुपमा भन्नैपर्छ- हामीले पहिले आर्थिक वृद्धि गर्ने हो । हामीले जोड राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासमै दिने हो, वृद्धि मै दिने हो र ध्यान चाहिँ समाजवादतिर जाने कुरामा दिने हो समानतामुलक वितरणमा दिने हो । यो प्रष्टता पनि नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्‍यो ।
अर्को, मलाई गर्व लाग्छ, समृद्धिलाई स्थापित गर्ने कुरामा मैले पनि केही योगदान गर्न पाएँ । अहिले हामी सबैले पार्टीका दस्तावेजहरुमा समृद्धि उल्लेख गरेका छौं । यसमा हामी सबैको एकप्रकारको सहमति छ । तर, समृद्धि के हो भन्ने कुरामा हाम्रो बुझाईहरु फरक छन् । त्यसको व्याख्या नगरी सिधै म के भन्दछु भने अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले पनि दिगो विकास लक्ष्य भनेको छ । हामीले पनि त्यसलाई स्वीकारेका छौं । त्यसैको आधारमा हामीले २०२२ सम्म गरिबीबाट मुक्ति हुने, २०३० सम्म मध्यम स्तरमा पुग्ने र २०४० सम्म प्रथम विश्वस्तरमा पुग्ने कुरा हामीले गरेका छौं, त्यही उन्मुख हामी हुनुपर्छ ।
विकास भनेको आर्थिक विकास मात्र होइन । मानवीय विकास पनि हो । सँगसँगै त्यो दिगो विकास पनि हो । पछिल्लोपटक थपिएको ‘ह्याप्पिनेस इन्डेक्स’ पनि हो । ग्रोथ इन्डेक्स अथवा जिडिपीको मापदण्ड, मानवीय विकास सूचकांक- एचडिआई, विकासको प्राकृतिक दिगोपनाको लागि सस्टेनएवल डेभलपमेन्ट र मानवीय खुसीका लागि ह्याप्पिनेस इन्डेक्स । यी चार आयाम भएको समग्रतालाई हामीले समृद्धि भन्ने हो । हिजो हामीमध्ये कतिपय मानिसहरुले केवल वृद्धिलाई मात्रै समृद्धि भन्ने गरियो । तर, यी चारैवटा कुराको समग्रता नै समृद्धि हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यी सबै कुरामा प्रष्टताका साथ आओस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई नकुरौं
यसैगरी जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, ठिकै पनि हो । संविधानले नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेका दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भएर जाने कुरा गरिएको छ, यो ठिकै छ । तर, मेरो आग्रह हामीले संयुक्त राष्ट्र संघले नै तोकेको मिति पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन । अबको चार वर्षमा हामी सबैभन्दा कम विकसित मुलुकबाट एउटा विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्ने हो । करिब-करिब हामीले ती इन्डिकेटरहरु पूरा पनि गरिरहेका छौं । अरु त हाम्रो लक्ष्य पूरा भएकै थियो तर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेको थिएन । यो वर्ष ८०० बाट १००० डलर नाघेको छ । १२०० डलर पुग्नुपर्ने हो । आउँदो दुई वर्षभित्र १२ सय डलर पुग्यो भने अन्य इन्डेक्सहरु पूरा गरेर हामीले दुई वर्षभित्र किन नगर्ने ? हामीले ०२२ साल किन पर्खने ? २०२० सम्म हामी विकासशील राष्ट्रमा ग्र्याजुएट गरौं । मध्यम स्तरमा जाने २०३० सम्म भनिएको छ । मध्यम स्तरमा पुग्न चार हजार डलर पुग्नुपर्छ । १० वर्ष किन पर्खने ? ५ देखि ७ वर्षमा किन नगर्ने ? त्यसलाई पनि अलि तल झारौं र २०४० सम्म पहिलो विश्वमा पुग्ने भनिएको छ, अर्थात् हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार डलर पुर्‍याउनुपर्छ । यसको लागि २० वर्ष किन पर्खने ? यसलाई पनि १५ वर्षमा झारौं । यसरी हामीले लक्ष्य निर्धारण गरौं र त्यसअनुसार सरकार जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्राथमिकता र पूर्वाधार
हामीले सबैले भन्छौं कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा । यो थेगोजस्तो बनेको छ । भन्छौं तर त्यसमा फोकस पुगेको छैन । सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन । खासगरी हाम्रा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका साथीहरुलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु- अहिले नै समाजवाद लगायतका ठूला कुरा गरेर हुँदैन । अहिले हामीले वृद्धिमा नै जोड दिने हो । त्यो भनेको पहिलो चरणमा हामीले पूर्वाधार विकास गर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार । भौतिक पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल यातायात, हवाई यातायात, बिजुलीलगायतका जुन पूर्वाधार हुन्छन्, त्यसलाई बनाउनै पर्छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र सडकका कुरा, फाष्ट ट्र्याक र उत्तर दक्षिण जोड्ने मार्गहरुका कुरा, मध्यपहाडी लोकमार्गका कुरा र बुढीगण्डकी लगायत ठूलाठूला जलविद्युत आयोजनाका कुरा, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलका कुरा । यिनलाई हामीले पूरा गर्नैपर्छ । यति नगरेसम्म बजारसम्म जोडिन सकिँदैन । बजारसँग नजोडिई यो निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र भत्कँदैन र औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्दैन । त्यसैले पूर्वाधार नै पहिलो हो ।
यसरी नै दोस्रो पूर्वाधार भनेको सामाजिक पूर्वाधार हो । त्यो भनेको शिक्षा नै हो । दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति बिना औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्दैन । अहिले हाम्रो देशबाट युवाहरु जसरी विदेश पलायन भइरहेका छन् र कृषि अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ । गाउँमा जमिन खाली बसिरहेको छ भन्ने अखबारमा समाचार आइरहेका छन् ।
हामीले कृषिमा नै क्रान्ति ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिला शिक्षामा नै जोड दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारपछि सामाजिक पूर्वाधार भनेको पहिलो शिक्षा नै हो । अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गरेर प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पहिलो घोषणा राम्रै गर्नुभएको थियो । मैले ट्वीट पनि गरेको थिएँ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने भन्ने योजना सही छ । म त भन्छु– यही बजेटबाट ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय खोल्नुपर्छ । नगरपालिकामा वडा बढी हुन्छन्, बढी बनाउनुपर्छ । प्रत्येक वडामा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसले नै आर्थिक क्रान्तिको आधार बन्छ ।
प्रधानमन्त्री र बुद्धिजिवीको प्रसंग
यसमा हाम्रो बौद्धिक स्तर पुगेको छैन । हुन त प्रधानमन्त्रीले अलिकति व्यंग्य गरेर यी बुद्धिजिवी भनेका कोट काट्ने मुसाजस्ता हुन् पनि भन्नुभएको छ । यो म स्वीकार पनि गर्छु । हामी केही डिग्रीधारी व्यक्तिमा दम्भ मात्रै पालेर बस्ने, अध्ययन नगर्ने प्रवृत्ति छ । अहिलेको जमानामा यतिधेरै सूचना र ज्ञानको प्रवाह भइरहेको छ, त्यत्तापट्टि जानुछैन । धेरै वर्ष पहिला पढेका कुरा गफ लगाउने, एनजिओ र आइएनजिओका छेउ न टुप्पाका रिपोर्ट लेख्ने र आफूलाई बुद्धिजिवी कहलाउने जुन परम्परा छ, त्यसलाई उहाँले व्यंग्य गरेको हो भने ठिकै हो । तर ज्ञान र विज्ञानको बौद्धिकतालाई भने अपमान गर्नु हुँदैन । ज्ञान र विज्ञानबिना संसारमा कही पनि विकास भएको छैन ।
मेरो प्रस्ताव यहाँनेर के हो भने, (यदि शिक्षा मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ भने) हामीले विश्वका १० उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका छानिका १० जना बुद्धिजिवीहरुलाई यहाँ बोलाऔं । महिनामा प्रत्येकलाई १/१ करोड खर्च भए पनि वर्षको १२ करोड रुपैयाँ कुनै ठूलो कुरा होइन । एक अर्ब कुनै ठूलो कुरा होइन । उनीहरुलाई यहाँ बोलाउँ र एक वर्ष यहाँ राखौं । हाम्रो देशका बुढाखाडा होइन, नयाँ पुस्ताका सकेसम्म ४० वर्षभन्दा कम उमेरका १०० जना बुद्धिजिवीहरुलाई विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र लगायतका विभिन्न विषयमा प्रशिक्षित गराऔं । अर्को हजारजना राम्रा विद्यार्थीहरु छानेर संसारका उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयहरुमा पढ्न पठाऔं । यसरी जनशक्ति तयार पारियो भने त्यसको जगमा समृद्ध नेपाल बन्छ । त्यतातिर फोकस हुनुपर्‍यो । मैले अलि देखिन ।
दोस्रो कृषि नै हो । हामी भन्न त भन्छौं तर, व्यवहारमा पुगेको छैन । दुई तिहाई जनसंख्या आश्रित भएको कृषिमा हामीले क्रान्ति नल्याईकन आर्थिक क्रान्ति हुँदैहुँदैन । कृषिका खुद्रे योजना बनेका छन् । यस्ता खुद्रे योजनाले भएन । मलाई लाग्छ, कृषिको निम्ति सिंचाई नै प्रमुख हो । त्यसैगरी उन्नत मल, बिऊ र प्रविधिका कुरा छँदैछन् । ठूला ठूला सिञ्चाईका योजना हुनुपर्‍यो । पश्चिम नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर पश्चिममा सिक्टा रानीजमरालगायतका जुन परियोजनाहरु बनेका छन्, त्यतिले पुग्दैन । खासगरी यो त मध्य तराई, पूर्वी तराई पट्पटि फुटिराखेको छ । दुई नम्बर प्रदेशका हाम्रा साथीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरुले जोड दिएर भन्नुपर्छ, सुनकोशीबाट डाइभर्सन गरेर कमला डाइभर्सन र मरिम डाइभर्सनलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उता झापापट्टि कोशीको पानी लैजाऔं । मध्यभेगमा कालीगण्डकीको पानी सुरुङ बनाएर तल उतारौं । यसरी सिञ्चाईका ठूला ठूला मेगा प्रोजेक्टहरु गरेर सिंचाईलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिऊँ ।
पहाडतिर पनि म अर्थमन्त्री छँदा सुरु गरेको थिएँ, पूर्व, मध्य र पश्चिमका टारहरुका सिचाईंका विशेष योजना सञ्चालन गरौं । त्यसरी मात्रै क्रान्ति आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यसपछि भनेको उद्योग र पर्यटन क्षेत्र नै हो । यसलाई एकीकृत ढंगले गरौं । ठूला उद्योग र पर्यटनका निम्ति हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु प्रत्येक प्रदेशहरुमा बनाऔं । विदेशी लगानीमा ठूला ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने र अरु स्वरोजगारका योजनाहरु सुरु गरिएको थियो, त्यसलाई परिमार्जन गरेर लाखौं युवाहरुलाई व्यापकरुपमा स्वरोजगार बन्न दिऊँ । साना र मध्यम उद्यमलाई जोड दिएर तुलनात्मक लाभका उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिऔं ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सामान्य प्रकारको पर्यटन होइन, विषयगत पर्यटन बढाउनुपर्छ । जस्तो कि कन्फरेन्स पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन यस्ता प्रकारका पर्यटनमा फोकस गरेर लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने ढंगले हामी जाऔं । त्यसका साथै सहायकरुपमा आइटीलगायतमा पनि ध्यान दिऔं ।
अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको सामाजिक सुरक्षा हो । टुक्रेटाक्रे सामाजिक सुरक्षाको कुरा नगरौं । सबैलाई स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरौं । १२ कक्षासम्मको अनिवार्य शिक्षा निशुल्क गर्ने कुरालाई कडाईपूर्वक लागू गरौं । किसानलगायत सबैलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं । यसो गर्दा खुद्राखाद्रीमा धेरै खर्च पनि हुँदैन । यसले वृद्धि पनि हुन्छ र वितरण पनि हुन्छ । यो नै सरकारको प्राथमिकता होस् भन्ने चाहन्छु ।
संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन- सरकार आँटोस्, हामी साथ दिन्छौं
आर्थिक क्रान्तिको निम्ति संरचनागत परिवर्तन र संस्थागत परिवर्तनका लागि केही आँट हामीले गर्नैपर्छ । त्यो बेला अहिले नै हो । यसपटक गर्नुभएन भने अर्को वर्ष गर्नै सक्नुहुन्न, अर्को अर्थमन्त्रीले गर्नै सक्दैन । अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई यो सुविधा छ । दुईतिहाईभन्दा बढी बहुमत भएको यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ । जेपनि भन्नाले नराम्रा कुराहरु भनेको होइन । नराम्रा बाहेक सबै राम्रा काम गर्न सरकारले आँट र हामीले समर्थन गर्नुपर्छ ।
नेपालको जुन भू–राजनीति छ, भारत र चीनको बीचमा हाम्रो अवस्थिति छ । यसलाई अत्यन्त संवेदनशील ढंगले हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी रिस उठेको बेला बमबम भएर उफ्रने र खुसी भएको बेला पूरै आत्मसमर्पण गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । म कसैलाई दोष दिन चाहिरहेको छैन । हामी सत्तामा छँदा सबैथोक सुम्पने र विपक्षमा भएको बेला चर्को राष्ट्रवादी बन्ने काम नगरौं । हामी सबै राष्ट्रवादी हौं । देशभक्ति जस्तो कुरा विवादमा पर्न सक्दैन । यो देश छ र त हामी छौं । नेपाल छ र त हामी नेपाली छौं । यो देश छ र त हामीले राजनीति गर्न पाएका छौं । त्यसर्थ, यस्तो कुरामा विवाद रहनु हुँदैन । दुईटै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राखेर दुवैतिरबाट लगानी ल्याउनुपर्छ ।
हिजो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चेतना त्यस्तै थियो, संसार त्यस्तै थियो । दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने बिम्ब प्रयोग भएको थियो । यी दुईटा ढुंगा पग्लिएर अहिले दुईटा महासागर बनेका छन् । दुई महासागरको बीचमा एउटा टापूजस्तो अहिले हामी बनिराखेका छौं । दुई महासागरबीचको पुल बन्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ । दुवैसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
खासगरी दक्षिणी छिमेकीसँग बढी सम्बन्ध राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । भूगोल, इतिहास, संस्कृति आदिका कारणले जोसँग बढी सम्बन्ध हुन्छ, त्योसँग बढी समस्या पनि हुन्छ । त्यही ढंगले हल गरौं महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ । स्वागतमा कुनै कञ्जुस्याई नगरौं । मलाई के चित्त बुझिरहेको छैन भने हामी जे पनि लेखिराखेका छौं । त्यसो गर्नुहुँदैन । अतिथि देवो भवः भन्ने हाम्रो संस्कार हो । भारत, चीन, अमेरिका जहाँबाट आए जोसुकै आए पनि हामीले पाहुनाको सत्कार गर्नुपर्छ । अपमान गर्नुहुँदैन । तर, हामीले कुरा गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखौं । समस्याको समाधान यसरी गरौं ।
चीन र अन्य देशसँग पनि हामीले सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । यो सन्तुलन मिलेन भने विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । म अन्तरहृदयदेखि नै भन्दैछु, मैले पनि यो देशमा केही समय सेवा गर्ने मौका पाएको छु । जबसम्म दुईटा छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्दैनौं, हामीले जतिसुकै टाउको फोरे पनि, जतिसुकै घोक्रो सुकाए पनि नेपाल समृद्ध बन्दैन । यसको चुरो कुरा भनेको यी दुई देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने र दुवै देशको लगानी यहाँ ल्याएर दुवै देशका मूल्य श्रृंखलासँग जोडिएका अर्थतन्त्र र उद्योगधन्दाको विकास गरेर यहाँको व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ । यहाँ वस्तु् उत्पादन गरेर बाहिर निर्यात गर्नुपर्छ । हाम्रो श्रमिक निर्यात गर्ने होइन । पुँजी आयात गरौं, वस्तु निर्यात गरौं । यस्तो अर्थतन्त्र विकास गर्न यी दुवै देशलाई बजार बनाउनुपर्छ । यी दुवै हाम्रा बजार हुन् । यसमा पनि सरकारको विशेष ध्यान पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
भारतलाई यसो भनौं
कतिपयलाई लाग्ला, मेरो पालामा बिप्पा सम्झौता भयो । म अहिले पनि भन्छु– बिप्पा सम्झौता गर्नुहोस् । एउटा मात्र होइन, ५० देशसँग बिप्पा सम्झौता गर्नुहोस् । भारत चीनलगायत सबै देशसँग गर्नुहोस् । हाम्रो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर विशेष नियम बनाएर दिनुहोस् र हाम्रा श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा हुने कानुन बनाउने अधिकार त हामीसँग छँदैछ । यसमा कुनै पनि प्रकारको कञ्जुस्याईं गर्न आवश्यक छैन ।
भारतसँगको सम्बन्धमा अरु धेरै कुरा कोट्याउनुको सट्टा हामीले बनाएको ईपिजी अर्थात् प्रबुद्ध समूहमार्फत् सबै समस्या हल गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ । मेरो सन्देश हाम्रा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् । महामहिम मोदीसँग सिधै भने हुन्छ । उहाँ पनि खुल्ला प्रकृतिको मानिस हुनुहुन्छ । उहाँलाई भन्नुपर्छ– ‘महामहिम, यहाँ हाम्रो कुर्सीमा बसेर नेपाल के चाहन्छ, तपाईंले त्यहाँ बोल्नुहोस् र तपाईंको दिल्लीको कुर्सीमा बसेर हामीलाई बोल्न दिनुहोस् भारत के चाहन्छ ? भारत के चाहन्छ, हामी पूरा गर्छौं र नेपाल के चाहन्छ तपाईं पूरा गर्नुहोस् ।’ यति भने पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ । मलाई विश्वास छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री धेरै अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले यो गर्नुहुनेछ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा संघीयताको कार्यान्वयन हो । हामीले लामो संघर्ष गरेर नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सत्ता र स्रोत विभाजन गरेर नयाँ ढंगले संघीय लोकतन्त्रको जुन अभ्यास हामीले गर्दैछौं, यसको कार्यान्वयन गर्न पनि हामीले ध्यान दिनैपर्छ । बजेट विनियोजन गर्दा, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यसमा जोड दिनुपर्छ । जोड अलि कम भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ । किनकी अबको युगको विकास र समृद्धि भनेको समावेशी विकास नै हो । अहिलेको विश्वको नयाँ विकासको अवधारणा यही नै हो । समावेशिता सुनिश्चित गर्ने संघीयताको ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेर नै हो । त्यसैले हामी सानातिना खुद्रा कुराहरुमा अल्झिनु हुँदैन । हामी सांसदहरु पनि केवल पानी, बाटो, घरआँगनको बाटोको कुरा गर्ने गर्दछौं । त्यो नगरौं । त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिऔं । वित्तिय आयोग बनाएर कति बजेट दिनसक्छौं ? बजेट तलसम्म पठाऔं । सानातिना काममा तपाईं हामीले हात नहालौं । प्रदेशलाई बढी कामकाजी बनाऔं । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानमा केही त्रुटि भएकोजस्तो बुझिन्छ । स्थानीय तह भनेको प्रदेशकै मातहत आउनुपर्छ । बरु जहाँ त्रुटि छ, त्यसलाई हामीले हल गरौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाइदिऔं । केन्द्रले नीतिगत सवाल र ठूलाठूला मेगा प्रोजेक्टहरु, राष्ट्रिय गौरवको योजना केन्द्रले ध्यान दिऔं । अरु सबै तल पठाउने ढंगले जाऔं । तपाईं हामी सांसदले सानातिना खुद्रे कुराहरु नमागौं । म यहाँहरुसँग यो आग्रह गर्न चाहन्छु ।
भूमिमाथि निजी स्वामित्व अन्त्य गरौं
तेस्रो संरचनागत सुधार भनेको भूमि सम्बन्धमा सुधार हो । भू–स्वामित्व अहिलेको युगमा आएर यसरी निजी स्वामित्वमा राखेर विकास र समृद्धि हुँदैन । सिञ्चाई र बाटोको योजना लैजानुछ, झगडा परिहाल्छ । मुद्दा मामिला हुन्छ, काम रोकिन्छ । पार्कहरु छैनन् । काठमाडौं शहर पूरै कंक्रिट जंगलजस्तो भइसक्यो । हाम्रा बच्चाहरुले खेल्ने ठाउँ छैन । बुढाबुढीले घुम्ने पार्क छैन । कसले दिन्छ जमिन ? एक बित्ता जमिन भेट्टायो भने मान्छेले कोठा थपेर बाहालमा लगाउँछ । यस्तो प्रवृत्ति छ । त्यसैले सकिन्छ, देशभरीका सबै जमिन राष्ट्रियकरण अथवा सामूदायिकीकरण अथवा स्थानीयकरण गरौं । स्थानीय तहलाई दिऊँ न । स्थानीय तहले जमिनको स्वामित्व लिन्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्वामित्वमा जग्गा रहन्छ र हामी प्रत्येक व्यक्तिले लिज राइट अथवा उपभोगको अधिकार मात्र लिगौं । पचास वर्ष अथवा सय वर्षको लागि उपभोगको अधिकार लिए भइहाल्यो । यसो गरियो भने हामीले सामूहिक हितमा विकास समृद्धि गर्न सक्छौं । नत्र जमिनमाथि निजी स्वामित्व रहुञ्जेलसम्म विकास समृद्धि हुँदैन ।
भू-उपयोग सम्बन्धी योजना पनि महत्वपूर्ण सवाल हो । केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँगको छलफलको क्रममा मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा गरेको थिएँ । म आफैं यससम्बन्धी विद्यार्थी भएकोले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा सही छ । त्यसको लागि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा ल्याण्ड युज प्लान (भू-उपयोग योजना) बनाऔं । बन्न त बनिसकेको छ । तर, कानुन बनेको छैन । कानुन बनाएर खासखास प्रयोजन बाहेक अरु ठाउँमा भूमिको उपयोगलाई मनपरी गर्न दिनु हुँदैन । कुन ठाउँमा जंगल राख्ने हो, कहाँ खेतीपाती गर्ने हो ? कहाँ बसोबास क्षेत्र बनाउने, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो ? यसरी योजना बनाएर अगाडि जाऔं ।
अहिले हामीसँग भएको ७५३ वटा स्थानीय तह र ४००० भन्दा बढी वडाका केन्द्रहरुलाई केन्द्रमा राखेर शहरीकरण गरौं । छरिएका बस्तीहरुलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्यौं भने सेवासुविधा, बस्ती बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली आदि केन्द्रित गर्‍यौं भने त्यसले नै नयाँपन ल्याउँछ । यसले औद्योगिकीकरणको ठूलो आधार बन्छ ।
बैंक र लगानीका कुरा
चौथो भनेको बैंक र वित्तिय क्षेत्रको सुधार हो । माननीय अर्थमन्त्री नै यसको विज्ञ हुनुभएकोले यसमा मैले धेरै भन्नु परेन । राष्ट्र बैंक नै उहाँले चलाइसक्नुभएको छ । अहिलेको हाम्रा बैंकिङ प्रणाली छ, यसले हुँदैन । खाली यसले पुराना सुद्खोरको भूमिका खेलिरहेका छन् । ब्याज बटुल्ने, नाफा खाने । देश टाट पल्टिरहेको छ, तर बैंकहरु नाफामा गइरहेका छन् । यसरी हुँदैन । त्यसैले बैंकहरुले खाली मनि मेकिङ, मनि सञ्चालन गर्ने मात्र होइन कि उत्पादन बढाउन लगानी गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने प्रकारको बैंकिङ सुधार हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो उपभोगको क्षेत्रमा जसरी लगानी भइरहेको छ, त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुर्‍याउने, बैंकको अतिशयोक्तिपूर्ण ब्याजदरलाई घटाउने ढंगले जानुपर्छ । यसमा आवश्यक सुधार उहाँले नै जान्नुभएको छ । अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउन लगानीको वातावरण बनाउनै पर्छ । निजी क्षेत्रले केके कुराहरु खोज्छन्, उनीहरुसँग बसेर सोध्नुपर्छ कि खोज्नुभएको कुरा के हो ? अर्थमन्त्रीले जुन नारा दिनुभएको छ, त्यसलाई अलि सुधार गर्नुपर्छ भन्छु म । निजी क्षेत्रलाई तर्साउनु पर्दैन । सिधै नारा दिए हुन्छ– मेक प्रोफिट, पे ट्याक्स अथवा नाफा कमाउ, कर तिर । नाफा जति कमाए पनि कमाउ तर कर चाहिँ नियम कानुनअनुसार तिर । यसरी प्रगतिशील कर प्रणाली बनाएर लागू गरियो भने निजी क्षेत्र पनि हौसिएर यहाँ आउँछ । पुँजी विदेशतिर लाँदैन ।
बाह्य लगानी ल्याउनको लागि जुन लगानी बोर्ड बनाइएको छ, त्यसलाई कामकाजी बनाउनुहोस् । यहाँ सबै मन्त्रालयले आफूतिर तानातान गर्ने अभ्यास छ, त्यसरी हुँदैन । लगानी बोर्ड प्रधानमन्त्री मातहत नै राखेर बरु त्यसको प्रमुख उपप्रधानमन्त्री सरहको मानिस बनाइदिनुहोस् । उसले वन डोर पोलिसीबाट ठूलाठूला परियोजनाहरु छिट्टै ल्याएर स्वीकृत दिने व्यवस्था गर्छ । त्यसो गर्यो भने विदेशी लगानी आउँछ, होइन भने १० ठाउँमा चहारेर प्रत्येक मन्त्रालयमा गएर उपसचिवदेखि लिएर सबैको हस्ताक्षर गर्दागर्दै मान्छे दिक्क भएर यहाँ कोही पनि आउँदैन । त्यसैले लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउनुहोस् र लगानी ल्याउनुहोस् । मेरो यही सुझाव छ ।
अख्तियारको विकल्प खोजौं
अर्को समस्या हो भ्रष्टाचार । यसलाई नरोकी विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । हामीले जुन भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र बनाऔं, त्यहाँ त्रुटिहरु छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यस्तो काम न काजको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएर केही अर्थ छैन । अन्यथा नलागोस्, संवैधानिक निकाय हो । बोल्यो भन्ने उहाँलाई पर्ला । म पनि त्यो दोषको भागीदारी छु तर हामीले संविधान संशोधन गरेर अर्को संचरनाको परिकल्पना गरौं ।
मेरो सुझाव के छ भने प्रधानमन्त्री लगायत सबै माथि निगरानी राख्ने एउटा पब्लिक एम्बुड्स्म्यान अथवा सार्वजनिक लोकपालको व्यवस्था गरौं । त्यसले प्रधानमन्त्री लगायत प्रधानन्यायाधीशको पनि गलत आचरण हेर्न सक्ने त्यस्तो निकाय बाहिर बनाइदिऔं । भित्रचाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार र आफ्नो मातहतको निकायलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि अहिलेको जस्तो सतर्कता आयोग होइन, साँच्चै नै कामकाजी खालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्छ । ताकि त्यसले गल्ती गर्‍यो भने पब्लिक एम्बुड्स्म्यान हुन्छ, त्यसले हेर्छ । यसरी यसमा आमूल परिवर्तन गरौं । अहिलेको तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । जसले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने हो, त्यो नै भ्रष्टाचारी भएको त हामीले देख्यौं । त्यसैले यसमा आमूल सुधार गरियोस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।
सिन्डिकेटका कुरा- यता पनि जोड दिने कि ?
मेरो अन्तिम सुझाव, हामी सबैले सुशासन भनेका छौं । हाम्रो प्रतिवद्धताप्रति मैले शंका गर्दिनँ । तर त्यसको लागि केही बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्छ । केही समययता सरकारले सिन्डीकेट प्रणाली अन्त्य गर्न सुरु गर्दै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य गरेको छ । यो कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय छ । तर, विभिन्न क्षेत्रमा सिन्डिकेट छन् । तपाईं हामी जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा जुन सिन्डिकेट प्रणाली हामीले लागू गरेका छौं, त्यसलाई पनि तोड्नुपर्छ र त्यसको सुरुवात राजनीतिक दलसँग आवद्ध जुन ट्रेड युनियनहरु छन् कर्मचारीका, शिक्षकका र प्राध्यापकहरुका, त्यसलाई एउटा ऐन नै बनाएर खारेज गर्नुपर्छ । त्यहाँ ट्रेड युनियन खोल्न पाईंदैन । उनीहरुको हकहितको लागि साझा ट्रेड युनियन बनाऔं । तर, दलगत ट्रेड युनियन यी सरकारी वेतनधारी कार्यालयभित्र बनाउन पाईंदैन, बनाउनु हुँदैन । त्यो भएसम्म सुशासन हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले पनि काम गर्दैन । शिक्षकले पनि पढाउँदैन । प्राध्यापकले पनि प्राध्यापन गर्दैनन् । यसलाई अन्त्य गरेपछि मात्र सुशासन अभियानको सुरुवात हुन्छ ।
अन्त्यमा, भूकम्प पुननिर्माणको सवालमा पनि सरकारले अझ जोड देओस् भन्ने आग्रह गर्दछु । एउटा बलियो केन्द्रीय प्राधिकरण बनाएर त्यसलाई छिटो गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । त्यो भएन । ढिलो भइसक्यो । अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । त्यसमा ध्यान पुगोस् र अन्त्यमा आग्रह गर्दछु– हामीले सपना देख्नै पर्छ । सपना नदेखीकन महान देशहरु कहिल्यै पनि बनेका छैनन् । एकजना प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रीले भनेका थिए– किप योर आइज अन द स्टार, एण्ड योर फिट अन द ग्राउन्ड । आकाशतिर तारालाई हेर तर जमिन टेक । तारालाई हेरौं । ठूलो महत्वाकांक्षा राखौं तर, व्यवहारिक पनि बनौं । त्यसो हुन सक्यो भने समृद्ध नेपाल बन्छ । त्यसको लागि उपयुक्त अवसर अहिले छ र त्यो पूरा हुन्छ ।
यिनै शब्दका साथ बिदा हुन चाहन्छु । धन्यवाद ।
(पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले २७ वैशाख २०७५ मा संघीय संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)